မော်လမြိုင်ဆေးရုံကြီးမှ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရသည့် ဆရာဝန် ၂ ဦး နှင့် Nurse ၁ ဦး ရောဂါပိုးကင်းစင်၍ ဆေးရုံမှဆင်းခွင့်ရ – CharTake
chartake | October 3, 2020 | Local News | No Comments
COVID-19 Positive ဖြစ်ခဲ့သော မော်လမြိုင် ဆေးရုံကြီးမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ဆရာဝန် (၂) ဦး နှင့် Nurse (၁) ဦး Negative ပြန်ဖြစ်ပြီး ရောဂါပိုးကင်းစင်သွား၍ မနေ့( 2. 10 . 2020) ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၁၂ : ၁၀) က ကျန်းမာစွာဖြင့် ဆေးရုံမှ ဆင်းခွင့်ရပါပြီ။
ဆရာဝန် (၂) ဦး နှင့် နာ့စ် (၁) ဦးတို့အား သမားတော်ကြီးများ၊ ဆ ရာမများမှ အားပေးစကားပြောကြားကာ ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ခွန်အားရှိပြီး မြန်မြန် ကျန်းမာလာအောင် နေ့စဉ် အစားအစာများချက်ပြုတ်ပေးပို့ လှူ ဒါန်းနေသော သာသနာနွယ် ဖောင်ဒေးရှင်းဆရာ တော် အရှင် စန္ဒဇောတိကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စွာ ကန်တော့၍ ပျော် ရွှင်စွာ ကျန်းမာစွာ ဆေးရုံဆင်းခဲ့ပါသည်။ မွန်ပြည်နယ် အနေနဲ့ Covid ကို မြန်မြန် ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။ Crd ; Zin Moe
Unicode … မျောလမွိုငျဆေးရုံကွီးမ ကိုဗဈကူးစကျခံခဲ့ရသညျ့ ဆရာဝနျ ၂ ဦး နငျ့ Nurse ၁ ဦး ရောဂါပိုးကငျးစငျ၍ ဆေးရုံမဆငျးခှငျ့ရ
COVID-19 Positive ဖွဈခဲ့သော မျောလမွိုငျ ဆေးရုံကွီးမ ကနျြးမာရေးဝနျထမျး ဆရာဝနျ (၂) ဦး နငျ့ Nurse (၁) ဦး Negative ပွနျဖွဈပွီး ရောဂါပိုးကငျးစငျသှား၍ မနေ့( 2. 10 . 2020) ရကျနေ့ မှနျးလှဲ (၁၂ : ၁၀) က ကနျြးမာစှာဖွငျ့ ဆေးရုံမ ဆငျးခှငျ့ရပါပွီ။
ဆရာဝနျ (၂) ဦး နငျ့ နာ့ဈ (၁) ဦးတို့အား သမားတျောကွီးမြား၊ ဆ ရာမမြားမ အားပေးစကားပွောကွားကာ ဂုဏျပွုဆုငှမြေား ခြီးမွငျ့ပေးခဲ့ကွပါတယျ။
ခှနျအားရပွီး မွနျမွနျ ကနျြးမာလာအောငျ နစေ့ဉျ အစားအစာမြားခကျြပွုတျပေးပို့ လ ဒါနျးနသေော သာသနာနှယျ ဖောငျဒေးရငျးဆရာ တျော အရငျ စန်ဒဇောတိကိုလညျး ကြေးဇူးတငျစှာ ကနျတော့၍ ပြျော ရှငျစှာ ကနျြးမာစှာ ဆေးရုံဆငျးခဲ့ပါသညျ။ မှနျပွညျနယျ အနနေဲ့ Covid ကို မွနျမွနျ ထိနျးခြုပျနိုငျမာပါ။ Crd ; Zin Moe